‘लभ स्टेशन’ लाई शुभकामना दिँदै करिश्माले भनिन्, ‘प्रदीप मनपर्छ’ « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘लभ स्टेशन’ लाई शुभकामना दिँदै करिश्माले भनिन्, ‘प्रदीप मनपर्छ’
अभिनेता प्रदीप खड्काले अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले एसईई परिक्षा दिइरहेको विजयस्मारक विद्यालयमै पुगेर आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘लभ स्टेशन’ को प्रचार गरेका छन् । उनले करिश्मालाई भेटेर एसईई परिक्षाको शुभकामना पनि दिए । करिश्माले पनि प्रदीपलाई यही शुक्रवार रिलिज हुने चलचित्र ‘लभ स्टेशन’ को सफलताको शुभकामना दिइन् ।
प्रदीपले आफ्नो पूरा परिवार करिश्माको प्रशंसक रहेको बताए । ‘पढाईलाई उमेरले छोक्दैन’ भन्ने उदाहरण पेश गरेकी करिश्माको तारिफ गर्दै उनले भने- ‘उहाँ हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ । मेरो ममी पनि उहाँले एसईई दिएपछि फेरि अध्ययन सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ । मेरो ममीजस्तै अरु धेरै करिश्मा दिदीबाट प्रभावित हुनुहुन्छ ।’ उनी करिश्मासँग चलचित्रमा काम गर्ने इच्छा रहेको पनि बताउँछन् ।
उनले ‘लभ स्टेशन’ मा करिश्मालाई लिने प्रयास भएको पनि रहस्य खोले । ‘उहाँलाई हामीले चलचित्रमा लिने प्रयास गरेका थियौं । तर, उहाँ त्यसबेला एसईई परिक्षाको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । म चाहिँ उहाँसँग काम गर्न एकदमै इच्छुक छु’, प्रदीपले भने । करिश्माले भने प्रदीप आफ्नो मनपर्ने अभिनेता रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई नयाँमा एकदमै मनपर्ने अभिनेता प्रदीप हो । उहाँले अभिनय पनि राम्रो गर्नुहुन्छ ।’
टिमअप हुने सम्भावना कति छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सँगै काम गर्ने मौका भविष्यमा अवश्य आउला । मसँग नभए पनि मेरी छोरीसँग आउला । अथवा, मेरो प्रोडक्सनसँग आउन सक्छ । सँगै काम गर्ने मौका मिले नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।’ चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’ मा अभिनेता राजेश हमाल, प्रदीपको पिताको भूमिकामा रहने चर्चा छ । आमाको रोलमा करिश्मा हुने सम्भावना रहला ?
पत्रकारको यस प्रश्नमा करिश्माले जवाफ दिइनन् । प्रदीपले भने राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धर आफूलाई सबैभन्दा मनपर्ने पेयर रहेको बताउँदै भने- ‘नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको उहाँहरु ‘मोस्ट फेभरेट पेयर’ हुनुहुन्छ । ‘प्रेमगीत ३’ मा उहाँहरु दुईजना हुनुभयो भने त गजब नै हुने थियो ।’ सम्भवतः प्रदीप र करिश्माको पहिलो पटक भेट भएको हो । दुईलाई एउटै चलचित्रमा हेर्ने दर्शकको ठूलो चाहना छ ।